Efa notontosaina tamin’ny alalan’ny fandaharana izay mandeha amin’ny haino aman-jery isan’andro izay nanomboka tamin’ny Alahady 29 martsa moa izany ary hifarana ny Alahady 12 Aprily ho avy izao. Ao anatin’izany anefa dia nanentana ireo mpikarakara ny hanamafisana ny fiombonana isam-pianakaviana mba hahamafy orina ny fifankatiavana sy ny fifandraisana ao amin’i Jesosy ilay Lohan’ny Fiangonana. Tokony hisy hoy izy ireo ny fifamelan-keloka ary tokony tsy hijanona intsony ny fiaraha-mivavaka isan-tokantrano indrindra amin’izao fitohizan’ny fihibohana izao. Ankoatr’izay dia manao antso avo ho an’ny Kristiana isam-batan’olona, ny Fiangonana sy Fikambanana Kristiana hanokana ny zoma masina 10 Aprily ho avy izao ho amin’ny fifadian-kanina.Ho voizina mandritra ny Paska ny fandresena ny valan’aretina, ny tsy finoana, ny tahotra, ny faharavan’ny fianakaviana sy ny tontolo iainana ary ny fahafatesana. Tanjona ihany koa ny hialàna amin’ny fisaratsarahana sy fitokotokoana, ny fitiavam-bola sy fitiavan-tena ary ny handresena ny paik’adin’ny satana rehetra.